आखिर किन समस्यामा पर्दैछन त नेपाली ख्रीष्टियन समुदायहरु (एक विश्लेषण) : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
आखिर किन समस्यामा पर्दैछन त नेपाली ख्रीष्टियन समुदायहरु (एक विश्लेषण)
नेपालको जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि धर्म निरपेक्षताको मुद्दाले निकै नै महत्व पायो र त्यसको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७३ ले नेपाललाई धर्म सापेक्ष मुलुकवाट धर्म निरपेक्ष मुलुकको रुपमा परिवर्तन गर्‍यो। मुलुकले त धर्म निरपेक्षताको रुप धारण गर्‍यो तर देशमा रहेका शासक गर्ने वर्गहरुको सोच परिवर्तन भएन। अझ यस्ता वर्गहरुले नेपालमा रहेका अल्पसङख्यक इसाई समुदाय माथी एक पछि अर्को गर्दै थप समस्याहरु ल्याउन खोजेको देखिन्छ। हाल देशका विभिन्न भागमा देखिएका क्रियाकलापले यस्तो सङकेत देखाइरहेको छ। आखिर धर्म निरपेक्ष मुलुकमा किन यस्तो हुदैछ, साधारण तरिकाले हेर्दा दुबै पक्ष जिम्मेवार रहेका छन तर मैले ख्रीष्टियन पक्षलाई ध्यानमा राखेर गरेको विभिन्न विश्लेषणहरु मध्ये तीनवटा प्रमुख विश्लेषणहरु यो पनि हुनसक्दछ।
१) सायद, परमेश्वरले नेपालमा भएका मण्डलीहरु र ख्रीष्टियन संस्थाहरु वलियो भएको चाहनुहुन्छ होला (लुका ६:२२ – २३)।
अहिले देशमा मण्डली र संस्थाहरुको वृद्धिसंगै कता कता मण्डलीहरु र यससंग आवद्ध भएर काम गर्ने संस्थाहरुको जग भने कम्जोर भएको हो कि, भन्ने शंका गर्न सकिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। जव–जव मण्डलीहरुमा समस्याहरु सिर्जना हुन्छ तव–तव मण्डलीहरुमा आत्मिक रुपमा वलियो हुन्छन। त्यसैले पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार मण्डलीलाई विश्वासमा वलियो बनाउनको लागी यस्ता किसिमका समस्याहरु आएका हुन सक्दछन। हाम्रो विश्वासको जांच गर्ने धेरै उपायहरु मध्ये यो पनि एउटा उपाय हुन सक्दछ। बाइबलमा यस्को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण अय्युबको जीवनमा देख्न सक्दछौ।
२) सायद, हामीलाई आफ्नो देश प्रति अझै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ (लुका २०: २२ – २६)।
नेपालमा कोही व्यक्ति जव इसाई वन्दछ तव उसले एकाएक अनौठो व्यवहार देखाउँदछ अर्थात उसले फरक किसिमले आफु बसेको समाजबाट अलग हुन थाल्दछ। तर हामीले जब बाईबलको अध्ययन गर्दर्छौ भने हामी ख्रीष्टियन भएपछि हाम्रो जिम्मेवारी अझ धेरै बढने बताउँदछ। सायद हाम्रा मण्डली द्धारा सँचालित सस्थाहरुमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सकेनौ कि ? अब हामीले पनि पारदर्शिता कायम गर्ने कोशिश गर्ने हो कि ?
३) सायद, अबको आउँदो दिनहरुमा एकताको आवश्यकता पर्यो कि (मर्कुस ३:२३ – २७ मती ५:२१, २२ लुका ९:५०)।
हामी ख्रीष्टियनहरुले पछिल्लो समयमा महशुश गरेको सबै भन्दा नमिठो अनुभव भनेको हामी एउटै परमेश्वरका छोराछोरी भएतापनि हामी आफैमा भने कहिल्यै एकै मनको भएर अगाडी बढन सकेनौ यो कुरामा हामीले हाम्रो गल्तीको महशुश गर्नैपर्छ। जुन ठाउँमा एकता छैन त्यो ठाउँमा विपक्षीहरुले सजिलैसग आक्रमण गर्दछ त्यो कुनै नौलो कुरो होइन। कुनै पनि सिंहले बगालमा आक्रमण गर्दैन तर बगालबाट अलगिएको एक्लोलाई मात्र आक्रमण गर्दछ। सायद, अहिलेको परिस्थितिमा यसैको फाइदा उठाएका हुनसक्दछन। त्यसैले मेरो विचारमा अब नेपालमा ख्रीष्टियन समुदाय भित्र एकता चाहिएको हो कि ? अब यसको लागी पनि बिचार गर्ने कि ?
यो लेख तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया अवश्य पनि सुझाव दिनुहोला।
कुनै सुझाव वा प्रतिक्रियाको लागी
« जब तपाईंले यसको आशा गर्नुभएकोहुँदैन (१)
जब तपाईंले यसको आशा गर्नुभएकोहुँदैन (२) »